That's so good, right?: A Subtle Seduction
'မိုးက ဆက်မရွာဘဲ မရပ်တော့ဘူးလား?' အိုး...စိတ်များတောင် ညစ်မိပါရဲ့။ ထင်းရှူးမြိုင်မြို့ကြီးကိုရောက်တာ ရက်သတ္တပတ်သုံးပတ် လောက်ရှိပြီ တစ်ခါမှ မိုးမစဲသေးဘူး။ သင်္ကေတနိမိတ်ဆိုးတစ်ခုလား လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမကျင်းပမီ ရွာနေတဲ့မိုးလိုပါပဲ။ ကံမကောင်း ခြင်းဆိုတာ အခုအချိန်မှာ နောက်ဆုံးလိုအပ်နေတယ် ကျွန်တော့်အတွက်။ ကျွန်တော့်အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက ပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး စနစ်ထဲနေထိုင်ဖူးပါရဲ့။ တစ်လထက်ပိုပြီး အတူနေထိုင်ခွင့်ပေးမယ့် မိသားစုမျိုးရှာမတွေ့အောင် ကျွန်တော့်အသက် အရွယ်က မွေးစားဖို့အရွယ်ထက်လွန်နေပြီလေ။ ဒါကြောင့် အခုတော့ လူငယ်တွေစုစည်းထိန်းကျောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအောက်မှာ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်လို လူငယ်တွေ ဟိုသည်ကစုစည်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေသင်ပေး မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထပ်မံမကျင် လည်ဖို့စောင့်ရှောက်ပေးကြရတာ တကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ သူများတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်ဆိုးသွမ်းလို့ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုပတ်ဝန်း ကျင်က လာရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ အရွယ်မရောက်ခင် ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကတော့ မွေးစားသူများက အတော်ချစ်ကြတာပါ။ အရွယ်ရောက်စပြုလာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့သွေးသားထကြွမှုကြောင့် သိက္ခာတွေမထိန်း ဆိုးသွမ်းမိတာကြောင့် 'နေမင်းသား'ဆိုတဲ့ လူငယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အောက်ရောက်ရပါတယ်။ မိဘမဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေ နေထိုင်ကျွေးမွေးရာစခန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါ။ အစိုးရ နှင့် မသက်ဆိုင်ပေမဲ့ အရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါရဲ့။ မိမိရှေ့ရေးအတွက် ရပ်တည်မှုကို စဉ်းစားမိသူများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ စနစ်တွေနှင့် ထိန်းကျောင်းပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးကြောင့်၊ ရောင်းစားခံလူငယ်၊ လေလွင့်လူငယ်များ စသဖြင့်အများကြီးပဲရှိတယ်။ ထွက် ပြေးလို့တော့ မရဘူးနော်။
ဟူး...ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလို့ဆိုရမယ့် လူငယ်တစ်စုဟာ ပင်မနေထိုင်ရမယ့် အဆောက်အဦးဆီမရောက်မီ ရှေးခေတ်ကဆောက်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အအုံပုံစံတစ်ခုမှာလောလောဆယ် စတည်းချကြရပါတယ်။ စံနမူနာနေထိုင်ရမှုတစ်ခုသော အရပ်ဒေသပါ။ ကိုယ့်အ၀တ်ကို လျှော်၊ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ရှင်း ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ့်တာဝန် စသဖြင့်။ နေရာအနှံ့ကိုတော့ စက်ဘီးစီးလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အသင့်။ ဒီအုပ်စုနှင့် သိပ်တော့ ကျွန်တော်မရောထွေးဖြစ်ပါဘူး။ လူမှုဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ လူတွေနှင့်တော့ အိုကေပါတယ်။
မီးဖိုချောင်ထဲ ကျွက်စီကျွက်စီနှင့် စားသောက်နေကြတယ် ညနေစောင်းမှာ။ ကျွန်တော်သူတို့တွေကို ဂရုထားမနေတော့ပါဘူး။ အဲဒါ အရွယ်တူခြင်းကြောင့်များလား?
Yeah, Yeah, Yeah မိုးကြိုးပစ်သံလို ကျွန်တော်ကြားရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ၈ယောက်သော အခြားလူငယ်တွေက သတိတောင်မမူကြပါဘူး။ သူတို့အားလုံးက ညနေစာပြင်နေတာကိုပဲ အာရုံစိုက်နေကြပြီး ဘာပြောမှန်းတောင်သိကြရဲ့လားမသိ။ မျက်လွှာပင့်ပြီး သူတို့ဘာဆက် လုပ်လည်းကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးအစားအသောက်တွေနှင့်လုံးထွေးနေကြတာ ရပ်တောင်မရပ်။ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းထောင့်မှာ လှေ ကားထစ်တွေကဆင်းလာတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မြင်မိပါတယ်။ သူက အရပ်ရှည်ရှည် အားကစားသမားတစ်ယောက်ပုံ ကိုယ်ဟန်နှင့် တည်ဆောက်ထားတာ အထူးသဖြင့် ရေကူးသမားတစ်ယောက်နှင့်တူပါရဲ့။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အရူးနှင့်တူတဲ့ ယူနီဖောင်းဆန်ဆန်နဲ့ အရှက်သည်းစွာဖုံးကွယ်ထားတယ်လေ။ အညိုရင့်ရင့်ဆံနွယ်တွေ မျက်ဝန်းညိုမှောင်မှောင်တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလား။ ဟီး... ကျွန်တော့်ဆီကို သူလျှောက်လာတန်ုး အာရုံထဲမှာ အ၀တ်မပါဘဲ မြင်ကြည့်ပြီးပြီ။
'ကျွန်တော်က ကျော်ကျော်ပါဗျ' ကျွန်တော်အသက်ရှူမှားစွာပြန်အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ Jeez, ကျွန်တော့်ကိုထိုးနှက်လိုက်သလိုပဲ သူ ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်တာ အသက်ရှူမှားသွားပါပြီ။ သူကျွန်တော့် အိတ်တစ်အိတ်ဆွဲယူလို့ ရှေ့ကဦးဆောင်ပြီး လှေကား အပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာပါလာသမျှ ဆွဲသိမ်းပြီးနောက် သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အခန်းဟာ အဆောက်အအုံကြီးရဲ့ အနောက်ဖက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကျက်တွေရှိပြီး ပရိဘောဂတော့ သိပ်မများပါဘူး။ မွေ့ယာပါ ဆင်တူ ခုတင်နှစ်လုံးနှင့်အတူ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာအ၀တ်ဘီရိုတစ်လုံး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါပဲကောင်းပါတယ် အခြေအနေက ယာယီလေးပဲဟာ။
'ဒါ ကိုယ့်အိပ်ယာ၊ ဒီဘက်က မင်းဟာပေါ့။ ဘီရိုဘယ်ဘက်ခြမ်းကို မင်းအ၀တ်တွေထည့်ဖို့ရှင်းထားပေးတယ်။ အစားအစာကျွေးချိန်တွေ က မနက် ၈း၀၀နာရီ၊ နေမွန်းတည့်ချိန်၊ပြီးတော့ ညနေ ၆နာရီတိတိ။ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ရှင်း ကိုယ့်အ၀တ်ကိုယ်လျှော်ကတော့ နေ့စဉ် လုပ်ရမယ့်တောက်တိုမယ်ရအလုပ်ပေါ့။ ဒီမှာ နည်းနည်းလေးတော့ မချောင်ဘူး' သူက စကားစမည်ပြောရင်း စည်းကမ်းအချို့ကို ပြောပြ ပါရဲ့။
'အောက်ကိုဆင်းပြီး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်တာ ကျေးဇူးနော်' ရှက်ရွံ့စွာပြန်ပြီးတုန့်ပြန်လိုက်တယ်။ Damn, စကားပြောတာ အဲဒီလို ရှက်ရွံ့ စိတ်က ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်မသိဘူး။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်အပေါ်ကျရောက်နေတာ အတော်ကြာတယ် hetero တစ်ယောက် အနေ နဲ့ဆိုရင် ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်း အရိပ်အမြွက်တောင်မပေးပါဘူး ကျွန်တော့်ကို။ ထုပ်ပိုး လာတဲ့ အရာတွေကိုဖွင့် ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေတစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းတွေကို နေရာချပါတယ် ဘီရိုတွေ၊ သစ်သားအံဆွဲတွေထဲ။ အညို ရောင် သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ရွေ့လျားမှုအတိုင်း ထပ်ကြပ်မကွာပါ။
'မင်းဆံပင်တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တယ်' ရုတ်တရက်သူပြောတယ်။ သူစကားစတင်ပြောနေခြင်းကို သေချာဖို့ ကျွန်တော်မှန်ကြည့်ဖို့မလိုပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးစေးတွေနှင့် စေးကပ်နေမင့်ဟာ။ ပခုံးပေါ်မ၀ဲတ၀ဲဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်ခွေတွေကလည်း မွှေးပျံ့မယ်မထင် မလျှော်ရတာ နှစ်ရက်ရှိပြီလေ။ သူက ကျွန်တော့်လို ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးပါပဲ။ သူတော်တော်ချောတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လည်း အတော်ကြည့်ကောင်းသူပဲဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သိတယ်။ ကမ်းခြေရေလှိုင်းစီးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ဟန်ကို တွေးမြင် ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေက နည်းနည်းကပိုကရိုနဲ့ ခွေလိပ်တဲ့စတိုင်လ်၊ မျက်ဝန်းတွေက မျက်တောင်ရှည်တွေနှင့် ၀န်းရံလို့၊ အထွေအထူးတော့ ကိုယ်ရည်မသွေးတော့ပါဘူး ကျွန်တော်က စိတ်ဝင်စားနေသူရှိရင် သူလည်ပြန်လှည့်ကြည့်လာစေနိုင်ပါတယ်။
'Thanks, ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ခေါင်းမှာဆံပင်တွေကစေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေပြီ၊ ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရေချိုးကြမလဲဗျ' ကျွန်တော့်ရှက်ရွံ့စိတ် တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုစိတ်ကြောင့် အဝေးပြေးကုန်ပါပြီ။ ဒီဘဲ နောက်မနက်မရောင်ခင် ကျွန်တော်နှင့် တစ်ခုခုပတ်သက်မှုဖြစ် ကိုဖြစ်စေရမယ်။ ပိုင်ထွန်း ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့ နေရာရဲ့အနောက်ဘက်က တံခါးကိုဖွင့် ရေချိုးခန်းရှိရာ စင်္ကြန်တစ်ဖက်စွန်းကိုလိုက်ပို့ပြီး အရာအားလုံးရှင်းပြပါတယ်။ သူက ရေချိုးခန်း တဘက်တွေခွဲဝေသုံးစွဲဖို့အကြောင်း စကားမဆုံးခင်မှာပဲ ကျွန်တော်အ၀တ်တွေအားလုံး ချွတ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်သူရှိရာဘက်ကို ကိုယ်ခန္ဓာကို လှည့်လိုက်စဉ်မှာတော့ သူ့ပေါင်ခြံက အရမ်းဖောင်းကြွနေတဲ့အရာကို ဘောင်းဘီတိုပေါ်ကနေသတိပြုမိခဲ့ပါရဲ့။ သူခပ်ကိုင်းကိုင်းရပ်နေရာကနေ ခါးကိုမတ် နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ရင်း အမူအယာပြောင်းတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒါကို သတိမမူမိဟန်ဆောင်ပြီး ရေပန်းအောက်ကို ခုန်ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်။ ရေပန်းခလုပ်ကို အသာဖွင့် ကန့်လန့်ကာကိုနည်းနည်း ဟထားလိုက်တယ်။ သူ ကျွန်တော်နှင့်အတူ ရေလာချိုးချင်ချိုးမှာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ပျက် လက်ပျက် နဲ့ကျန်ခဲ့ရပါတယ်။ ရေချိုးခန်းတံခါးကို သူပိတ်ပြီး အိပ်ခန်းဆီကို လမ်းပြန်လျှောက်သွားသံကိုကြားရတာ။ စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ကျွန်တော် က သူ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ။
တစ်ကိုယ်လုံး အကြိုအကြားမကျန်အောင် ဆေးကြောမွှေးပျံ့စေပြီးနောက် အိပ်ခန်းဆီကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ခပ်ကြီးကြီး တဘက်တစ်ထည်ကို ခါးမှာပတ်၊ ပြီးနောက် အခန်းတံခါးကို မခေါက်ဘဲဝင်သွားလိုက်ပါရဲ့။ ပိုင်ထွန်းက ခုတင်ပေါ်မှာ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ထိုင်ပြီးဖတ်နေတယ်။ အပေါ်အင်္ကျီမပါ။ ရှက်သွေးနည်းနည်းဖြန်းထားတဲ့ မျက်နှာနှင့်။ အိပ်ရာခင်းအောက်မှာမပေါ့်တပေါ်ဖြစ်နေတာ Lube ဘူးအဖုံးဆိုတာ ကျွန်တော်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝင်လာတော့ သူ့နှုတ်က 'ဟိုင်း'လို့ပြောပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမကြည့်။ ကျွန်တော် သူ့ ရင်အုပ်ကိုမျက်စိရောက်တော့ သူ့ရင်အုပ်ဟာချောမွေ့နေပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေက အနက်ရင့်ရင့်။ သူ့ဗိုက်မှာ6pack မရှိပေမဲ့ အဆီပိုမရှိချပ် ရပ်လို့။
'ရေကူးအားကစားတွေတော်တော်များများက ဒီလိုဘော်ဒီပိုင်ရှင်တွေလေ' သူဘာမှပြန်မပြောတော့ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ကာ သူ့မဂ္ဂဇင်းကို ပြန်ဖတ်နေပါတယ်။ အ၀တ်အစားတွေလဲလှယ်တော့ ချည်သားဘောင်းဘီပါးပါးတစ်ထည်ကို မ၀တ်မဖြစ်ဝတ်တာပေါ့။ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းအောင်လှတယ်လို့ အပြောခံရတဲ့ငပဲကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပိုင်ထွန်းစာဖတ်ချင်ယောင် ဆက်မဆောင်နိုင်တော့။ သူ...ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို အသားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကို မ၀ယ်ခင်စစ်ဆေးနေတဲ့အတိုင်းအာသာငမ်းငမ်းဖြစ်စပြုပြီ။ ကျွန်တော်ဘာမှ သတိမပြုမိဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးဝါသနာက နှိုးဆွနိုးထစေတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်လေ။
'ဟူး...ဘာလဲဗျ' ကျွန်တော်အိပ်ချင်မူးတူးပုံစံနှင့် ထထိုင်လိုက်တယ်။ 'ဒီလို ငါ..မင်းကို လုပ်ကိုင်နေတာ စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်' သူပြုံးဖြဲဖြဲနှင့် စကားဆိုတယ်။ ခါတိုင်းလူတွေလိုပဲ ကျွန်တော့်ကစားပွဲအောင်မြင်ပါပြီ။ ကျွန်တော် အားရပါးရပြုံးပြလိုက်ကာ သူ့ဦးခေါင်းကိုကိုင် ကျွန်တော့်ငပဲဆီကိုတေ့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေထဲ အားပါးတရထည့်သွင်းလိုက်ရင်း အငမ်းမရစုပ်မျိုပါရော။ ကျွန်တော် သိတာပေါ့ ရေချိုးခန်းက အပြန် တဘက်လေးခါးမှာပတ်ထားပြီး ၀င်လာတာကို သူကြည့်နေကတည်းက။ သူကျွန်တော့်ငပဲကို အရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း သူ့လျှာတွေ အာတွေနှင့်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ သူ့လျှာဖျားလေးဟာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကစားနေတာများ ကြက်သီး ထလောက်တယ်။ သူ့ပါးစပ်ဟာ ငပဲထိပ်ဖြားလေးကိုမျှဉ်းပြီး စုပ်နေတာအတော်မိုက်တာပေါ့။ ကျွန်တော်များ မျက်ဖြူစိုက်နေပြီလား ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေပူနွေးလာကာ အရေပြားတွေတောင် တင်းတောင့်လာသလိုပါ။ ကျွန်တော် သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ရင်း အသာတွန်းလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မော့ကြည့်တယ်။
ကျွန်တော့်ပခုံးအစုံကို အသာအယာ သူဆွဲယူရင်း တစ်ဖက်လှည့်ကာ ကုန်းစေပါတယ် သူက။ ကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်တသင့် ဂဏန်း နံပါတ်လေးကို ပြောင်းပြန်မှောက်လိုက်သလို တင်ပါးတွေကိုထောင် ရင်အုပ်ကို မွေ့ယာပေါ်နှိမ့်ကပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့် တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် ပွတ်သပ်ပြီးမှ ခရေ၀ထဲကိုတစ်ထစ်ခြင်းဖိသွင်းပါရော။ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော်လက်ခံဖူးသမျှ ငပဲတွေထဲ အကြီးဆုံးပါပဲ။ တော်ပါသေးရဲ့ သူ့ပစ္စည်းတဖြည်းဖြည်းသွင်းတာ သိပ်မနာလို့ရယ် အလိုက်တသင့်အဆင်ပြေလို့။ ကျွန်တော့်ခါးကို သူ အားပြုရင်း ခပ်ဖြေးဖြေးအသွင်းအထုတ်သူ စလုပ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် နှေးနေရာကနေ သွက်သထက်သွက်လာတယ် ဆောင့်ချက် တွေဟာ။ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်နှင့် မှီနိုင်သမျှ သူ့တင်ပါးကိုနောက်ပြန်ကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ဆီဆွဲယူဖြစ်ပါရဲ့။ သူ့မွှေချက် ဆောင့်ချက် တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တကယ့်အရသာပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှာ ညည်းညူသံကျယ်ကျယ်ထွက်လာတော့ ပိုင်ထွန်း ကျွန်တော့် ပါးစပ်ကို သူ့လက်နှင့် လှမ်းပိတ်လိုက်ပါတယ်။ Shit! ကာထားတဲ့ နံရံတွေက တကယ်ပါးလိုက်တာ။ ကျွန်တော် ခေါင်းကိုငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း ခေါင်းအုံးဆီမျက်နှာအပ်လိုက်ကာ အသံတိတ်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့။ သူ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးချရတာအတော်သဘောကျ ဟန် တူရဲ့ ခပ်သွက်သွက် သူ့ခါးကိုလှုပ်ရှားနေရဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ ဆိမ့်ကနဲအရသာခံစားရင်း အသံမထွက်အောင်တော့ ထိန်းရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပခုံးသားတွေကို သူ့လက်သည်းနှင့်ခြစ်တော့ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကြွက်သားတွေက သူ့ငပဲကို ပိုညှစ်ပြီပေါ့။ သူ့ခြေထောက်တွေ ဟာ တုန်ခါလာပြီးနော်က ကျွန်တော် စတင်နီးကပ်လာပြီလို့ ခံစားရပါတယ် ပြီးဆုံးဖို့။ အထူးသဖြင့် ပိုင်ထွန်း။ သူ တစ်ချက်ခြင်းဖိကပ် ဆောင့်လိုက်ရင်း အတွင်းပိုင်းဆီ သူ့အရည်တွေ ပစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း မရှေ့မနှောင်း အိပ်ယာခင်းပေါ် ပန်းထုတ် မိတာပေါ့။ ပိုင်ထွန်း အသက်ရှူသံမောမောကို နောက်ဖက်ဆီက ကြားနေရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို အနမ်းပေးတာ ကျွန်တော့်ကျောရိုးတစ်လျှောက် တဆတ်ဆတ်တုန်သွားစေပါရဲ့လေ။
'Fuck, ငါ အရမ်းကောင်းတာပဲ ခံစားရတာ' ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ပြီး တိုးတိုးပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ဘက်ကို ပြန်လှည့်ပြီး သူ့နဖူးကို အားရပါးရ အနမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
'နောက်တစ်ကြိမ်လောက် ကျွန်တော်တို့ ထပ်လုပ်ကြတာပေါ့' ကျွန်တော် ရှက်ရွံ့ရွံ့နှင့် တုန့်ပြန်စကားဆိုလိုက်တာပါ။
ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကို ဖုံးထားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်း ညဘက်အိပ်ဖို့ အိပ်ခန်းတွေဆီသွားခဲ့ပြီဆိုမှ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားဖြစ်ပါရော။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးစလုံး ကျေနပ်နေမှု သာယာနေမှုတွေဟာ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ သည့်ထက်ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိလာမယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 8:21 PM
My Step – Dad the Cop (Chapter Two)
HIV ၊ ကာလသားရောဂါနှင့် TG များ ဆက်နွယ်မှု